China Meshed Carrot Mmepụta na Mmepụta | Nongchuanggang
Nkọwa ngwaahịa ngwaahịa a na-ahụ anya: Mkpụrụ karọt na-edozi ahụ abụghị naanị uto na-adọrọ adọrọ, kamakwa, a na-ewerekwa nri nri ahụike kansa, nri enwere ọtụtụ carotene, mgbe ọ banyere n'ime ahụ, a ga-agbanwe ya na vitamin A, ọ nwere ike ibute sel nke cancer na-ebelata nke ukwuu, na meshed karọt nke lignin bụkwa eke mgbochi-cancer Efrata, otú ndị mmadụ na-erikarị meshed carrots nwere ike mmetụta nke igbochi cancer.
Karọt a na-akpọ Meshed bụ ụdị nri a na-eme mgbe karọt na-agbagharị, carotene dị n'ime ya nwere ike ime ka ọrụ hematopoietic ahụ dị mmadụ mma, belata omume anaemia na ọbara oyi, na mgbakwunye n'ụdị nri a abụghị ọgaranya na potassium, ọ dịkwa ihe dị mkpa iji chekwaa ahụike mmadụ.
Vitamin A na karọt nwere ike ịkwalite nsị nke calcium, na calcium bụ akụkụ dị mkpa nke ahụike ọkpụkpụ, yabụ iri apịtị apịtị nwere ike ime ka ogo ọkpụkpụ dịkwuo mma, belata omume nke ọkpụkpụ na ọrịa nkwonkwo. Tụkwasị na nke ahụ, apịtị apịtị ka na-enwe mmetụta nke ịkwa ụta n'eriri afọ, eriri nri dị n'ime ya nwere ike ime ka eriri afọ nke eriri afọ dị nro, nwere ike mee ka ọgbọ nke nsị na ịpụpụ dị ngwa.
Nke abuo, enwere uru ato di uku nye umu aka ka ha rie karọt puree.
1, kpuchido afọ, gbochie afọ ọsịsa na mgbaàmà ndị ọzọ. Usoro eriri afọ nwa na-emebi emebi, ọkachasị mgbe ekpughere ya n'èzí. Ọ bụrụ na nri nke zuru oke ma ọ bụ nri agbakwunye ezughi nri zuru oke, ọ ga-eme ka nwa ahụ nwee nsogbu na afọ ọsịsa. Na karọt nwere pectin, nke nwere ike igbochi afọ ọsịsa. Ya mere, inye nwa gị nri karọt a nụchara anụcha nwere ike inye aka gbochie afọ ọsịsa.
2. Banye nri ma welie ahụ ike.Baby rie karọt apịtị nwere ike ịgbakwunye vitamin A zuru oke ma chọpụta ihe ndị dị mkpa na ahụ mmadụ, iji mee ka ahụike nwata ahụ dị ezigbo mma.
3. Nwee mmetụta nke afọ ojuju ma kwadebe maka ịwepụ ara. Karoọt dị ọcha nwere ike inye aka mee ka nwa gị nwee afọ ojuju mgbe ọnụọgụ nke mmiri ara ara ji nwayọ belata.
Osote: Karoọt ntụ ntụ